Vaovao - In | fandresena volamena Wright "Total Quality Management (TQM) amin'ny ady tena izy" fiofanana manokana
Ao amin'ny | fandresena volamena Wright "Total Quality Management (TQM) amin'ny ady tena izy" fiofanana manokana
Mba hanatsarana tanteraka ny fahatsiarovan-tena amin'ny fitantanana ny kalitao, ny fahalalana matihanina sy ny fahaiza-manaon'ny mpiasan'ny orinasa, hamafisina ny fanaraha-maso ny vokatra sy ny fahaizan'ny orinasa tsirairay. Ny 11 ka hatramin'ny 12 septambra 2021, mpampianatra Xu Xingtao, manampahaizana manokana momba ny fitantanana ny famokarana, dia hasaina hanao fiofanana TQM mandritra ny 2 andro ao amin'ny Kinwright Training Center. Maherin'ny 100 ny olona nandray anjara tamin'ity fiofanana ity, anisan'izany ny talen'ny orinasa sy ny mpiasa ambony sy ny r&d, ny famokarana ary ny kalitao mifandraika amin'izany.
Mba hanatsarana ny vokatry ny fiofanana, manatsara ny fandraisana anjara amin'ny fianarana ny mpiasa sy ny hafanam-po. Ny fiofanana dia mampiasa ny tena vondrona mpiady PK fomba, ary mampiditra ny rafitra scoring ao amin'ny fiofanana. Mizara ho vondrona 12 ireo mpanazatra. Ny vondrona tsirairay dia mametraka anaran'ny ekipa, mamolavola LOGO ary teny filamatra.
Ny votoatin'ity fiofanana ity dia ahitana ny fitantanana TQM (miompana amin'ny kalitao), ny fanatanterahana ny TQM amin'ny orinasa, ary ny fizotran'ny fampiharana TQM.
Ny singa fototra amin'ny filozofia famokarana mahia dia ny fampihenana ny vidiny, ny fanafohezana ny tsingerin'ny famokarana ary ny fanatsarana ny kalitao amin'ny alàlan'ny fanafoanana ny hetsika tsy misy vidiny amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasa. Nizara fitsipika valo momba ny TQM sy fomba QC fito izy, nanadihady ny antony ary nahita ny fanoherana miaraka amin'ny zava-misy marina momba an'i Kinwright, ary nanao fanazaran-tena teny an-toerana sy fampiasana fitaovana sasany, mba hahafahan'ny mpianatra mitadidy lalindalina kokoa sy mampihatra izay tena ilaina. nianatra izy ireo.
Ezaka iray, vokatra iray hafa. Ity fiofanana ity dia mampiditra ireo rohy mifampitohy toy ny famaliana fanontaniana sy lalao, ary manofana ny mpianatra hifanaraka sy hiray hina ary hiara-miasa akaiky. Mazoto miresaka momba ny sehatra, mazoto manangana ny tanany mba hiresaka momba ny teboka, tena mafana fo.
Amin’ny fiafaran’ny fiofanana dia isaina araka ny toe-javatra misy ny fianarana ny naotin’ny tarika tsirairay. Ny vondrona manana isa ambony indrindra dia homena ny mari-pankasitrahana sy ny loka, ary ny mpandresy rehetra dia hahazo isa A20.
Ny kalitao no fototry ny fahaveloman'ny orinasa sy ny fampandrosoana, marika fitantanana kalitao: fahafaham-po amin'ny mpanjifa avo lenta, tahan'ny vidiny ambany. Amin'ny ho avy, ny orinasa dia hampivelatra andiana fepetra fanatsarana mifototra amin'ireo tanjona roa ireo, hanatsara ny kalitaon'ny fahatsiarovan-tena sy ny fahaiza-manao ara-teknika ny mpiasa rehetra, hanome fanohanana mafy ho an'ny orinasa fanatsarana ny kalitao, ary hamorona ho avy handresy-fandreseny ho an'ny Jinpin.
Fotoana fandefasana: Oct-12-2021